Mukurumbira unokwanisa kusvika pamunhu wese here? | Kudzidziswa Kwekuziva
Tese tine vamwe vanhu muhupenyu hwedu vanokwanisa kuyeuka zvinhu zvisinga fungirwe isu. Tichaziva zvakare mamwe mafirimu kana eTV akateedzana mavara anogona kurangarira zvese, sekombuta. Izvo vanhu vashoma vanoziva ndezvekuti kugona kubata nemusoro kunogona kuvandudzwa nehunyanzvi uye kurovedza muviri zvishoma. Izvi ndizvo zvinobuda mutsva nekutsvagisa pamusoro wenyaya.
Ngatidzorei nhanho kumashure ...
Mumwe munhu achange anzwa nezve World Memory Championship pamwe neiyo nzira ye loci, chishandiso chirevo pasi pesimba rakasiyana-siyana rinoshandiswa nevamiriri vendangariro (vatori vechikamu vakambotaurwa). Muchidimbu, kune avo vasingazvizive, nzira iyi ine mukubatanidza ruzivo kuyeuka kune dzinozivikanwa nharaunda nenzvimbo, tichishandisa izwi rehuropi hwedu kushandisa kwedu munemonic kugona kutungamira isu munzvimbo (tinokurudzira kuverenga iyi yakanaka hurukuro kune chiremba wepfungwa Edvin Moser, mubayiro wekurapa mushonga muna 2014).
Ngatifungei kuti isu tinoda kuchengeta iyo yekutenga rondedzero iyo, kuti zvive nyore, tinongori nezvinhu zvina: chingwa, hupfu, matomatisi uye pasita.
Kujekesa maitiro acho sezvazvinogona, isu tinofanira kuisa zvinhu zvinofanirwa kuchengetwa munzvimbo inozivikanwa se, semuenzaniso, imba yako. Zvekare, kuti tifambise iyo pfungwa, isu tinomiririra nharaunda neyechirongwa mugwagwa.
Sezvatinogona kuona, inyaya yekuona zvinhu uye kuzvirongedza nepfungwa munzira. Kuti tizvayeuke pavaizotevera, chatinofanira kuita ndechekudzokorora pfungwa idzi nekuenda "kuona" izvo zvinhu zvatakaisa mumusoro. Zvakareruka, handizvo here?
Ngatirambei tichitsvaga ...
Ivo vanyori vekudzidza pakutanga ivo vakasarudza boka revatambi vendangariro neboka re "zvakajairika" vanhu, vachivaisa vese kumabvunzo ekuayeuka (makumi manomwe-nemusoro kuyeuka) uye inoshanda yemagineti resonance imaging (maitiro ekuona kwehuropi ayo, kuburikidza nemumwe muchina, unomutendera cherekedza kuti ndedzipi nzvimbo dzinonyanya kushanda panguva yakapihwa). Kwapera mushure memaminitsi makumi maviri zvave kugona kuona iyo inotevera data: vatambi vakakwanisa kuyeuka anenge mazwi ese (paavhareji makumi manomwe neshanu kubva muzana) ivo vasiri vatambi vakayeuka kanopfuura hafu yavo (anenge makumi mana).
Munguva diki yechipiri ivo vasiri-vatambi vakakamurwa kuita mapoka matatu:
Boka rekutanga akaiswa pasi pe yerefu yekudzidzira ndangariro, inogara mavhiki matanhatu, kudzidza mnemotechnics yakafanana neiyo inoshandiswa nevamiriri vendangariro
Boka rechipiri akaiswa pasi pe kudzidziswa kwe kushanda ndangariro, inogara kwemavhiki matanhatu
Boka rechitatu havana kuita chero kudzidziswa
Vanhu vese veavo mapoka matatu vaivapo vachirangarira uye nekushandiswa kwemagineti yekufungidzira bvunzo dzese kumberi uye mushure mekudzidziswa (boka rechitatu pachena, kusiyana nevamwe, rakaongororwazve mushure memavhiki matanhatu ekusaita basa).
Kana wapedza kudzidziswa izvo zvidzidzo zvinodzidziswa mnemotechnical zvakawedzera mashandiro azvo nekusvika kune avo vemitambo yekurangarira; Uyezve, yavo maitiro ehuropi akange atangawo kufanana neyeyeyemitambo enguva. Shanduko idzi dzakaramba dzichienderera mushure memwedzi mina pasina kudzidziswa.
Mune mamwe mapoka maviri, zvisinei, hapana shanduko yakakosha yakaonekwa.
Kwete zvakaipa kufunga kuti yakanga iri yenguva pfupi yekudzidzira nguva (inenge mwedzi nehafu). Nekudaro, kusahadzika kunoramba kuri kwekuti aya maitiro haawedzere kune mamwe mamiriro pane ayo anoedza, ndiko kuti, zvakakosha kuti uone kana vanhu vanodzidza idzi mnemotechnics vanogona kubatsirwa nazvo muhupenyu hwezuva nezuva. Nekudaro, kumwe kufambisira kuri kudiwa kupindura uyu mubvunzo wekupedzisira.
THEME - Memory uye kudzidza bvunzo: ongororo
Dresler, M., Shirer, WR, Konrad, BN, Müller, NC, Wagner, IC, Fernández, G.,… Greicius, MD (2017). Kudzidziswa kweMnemonic kunogadzirisa maratidziro ehuropi kutsigira ndangariro yepamusoro. Neuron, 93, 1227-1235.
memory, nzira ye loci, kugadzirisa ndangariro, imba yekurangarira, super memory
Ko supermemory iri mukati memunhu wese kusvika?2017-08-282020-10-25http://www.trainingcognitivo.it/wp-content/uploads/2017/08/nuovologo_87e9aa904327d53301f73f9191e17e49.pngKudzidziswa kwekuzivahttps://www.trainingcognitivo.it/wp-content/uploads/2017/08/supermemoria.png200px200px
Kurara kwakadzika uye Alzheimer's: hukama hupi?Dementia, Neuropsychology
Kugona kwemasvomhu uye pfungwa yehuwandu. Ukama hupi?Zvinyorwa, SLD, SLD, Neuropsychology, Kuziva SLD